कोरोना भाइरस बारे भ्रमको तथ्य जाँच | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य कोरोना भाइरस बारे भ्रमको तथ्य जाँच
कोरोना भाइरस बारे भ्रमको तथ्य जाँच
२०७७, १० जेष्ठ शनिबार १०:३९
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यस महामारीबारे सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनि यूट्यूब च्यानलहरुमार्फत गलत सूचना फैलिने क्रम जारी छ । महामारीको समयमा गरिने भ्रामक सूचना र मिथ्याकाे प्रचार र अपुरो जानकारीले ठूलो हानि नोक्सानी पुर्याउँछ । नेपालका सञ्चार उपभोक्तामाझ प्रसारित कोरोना भाइरस बारेका केही भ्रामक सूचनाको हामीले तथ्य जाँच गरेका छौँ ।
तातो पानीमा नुन र भिनेगर (सिर्का) मिसाएर कुल्ला गर्दा कोभिड–१९ निको हुन्छ ?
कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचार गर्ने उपायहरु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सुझावहरु फैल्याइएका छन् । धेरै प्रयोगकर्ताबीच फैलिएको त्यस्तै एक सुझावमा कोभिड–१९ भएको व्यक्तिले तातो पानीमा नुन र भिनेगर (सिर्का) ‍मिसाएर कुल्ला गरेमा उक्त रोग निको हुने दावी गरिएकोे छ ।
उक्त सामग्रीमा भनिएको छ, “फोक्सोमा पुग्नुभन्दा पहिले कोरोना भाइरस घाँटीमा चार दिनसम्म रहन्छ । यस समयमा संक्रमित व्यक्तिलाई खोकी लाग्न थाल्छ र घाँटी दुख्छ । यदि उसले मनतातो पानीमा नुन वा भिनेगर मिसाएर कुल्ला गरेमा त्यसले भाइरसलाई हटाउँछ ।” चिसो, रुघाखोकी र घाँटी दुख्दा तातो पानीमा नुन हालेर कुल्ला गर्ने घरेलु उपचारको विधि लामो समयदेखि चलिआएको भएपनि यसले कोरोना भाइरस निको हुन्छ भन्ने प्रमाण छैन । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले यसबाट घाँटी दुखाइ कम हुने जनाएको छ ।
सलाइन पानीले नाक सफा गर्यो भने यो निको हुन्छ ?
माथिल्लो दावीजस्तै यो पनि रुघाखोकीको उपचारमा काम लाग्छ तर कोभिड–१९ यसबाट निको हुन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित होइन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसखाले भ्रम चिर्न प्रकाशित गरेको लेखमा भनिएको छ, “नाकमा सलाइन (नुनिलो पानी) हालेर सफा गर्दा नोभल कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण भेटिएको छैन । रुघाखोकी लागेको बेला नाकको भित्री भागमा सलाइनले पखाल्दा रुघाखोकी चाँडै निको हुनसक्छ भन्ने केही मात्रामा पुष्टि भएपनि यसले स्वासप्रश्वासमा भएको संक्रमणलाई रोक्न सक्दैन ।”
कोरोना भाइरस १२ घन्टासम्म फलाममा जीवित रहनसक्छ ?
‘अफिसियल खबर’ नामक यूट्यूब च्यानलले फलाममा कोरोना भाइरस १२ घण्टा जीवित रहनसक्छ भनेर प्रसारण गरेको छ । उक्त भिडियोमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितले फलाम छोएमा भाइरस १२ घन्टासम्म जीवित हुने बताइएको छ । भिडियोमा सुझाइएका कोभिड–१९ बाट बच्ने अन्य उपाय सही भएपनि फलाममा भाइरस १२ घन्टासम्म मात्र जीवित रहने दावी गलत हो ।
अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका वैज्ञानिकहरुको द न्यू इङ्गल्याण्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा छापिएको अनुसन्धान अनुसार कोरोना भाइरस हावामा उडेर आउने थुकका कण र सतहमा केही घण्टादेखि दिनसम्म रहनसक्छ । वैज्ञानिकहरुले उक्त भाइरस हावामा उडेर आउने थुकको कण (एरोसोल्स) मा ३ घण्टासम्म, तामामा ४ घण्टासम्म, कार्टुनमा २४ घण्टासम्म र प्लास्टिक र खिया नलाग्ने स्टिलको सतहमा २ देखि ३ दिनसम्म जीवित रहनसक्ने बताएका छन् ।
काेराेना भाइरसबारे भ्रामक सूचनाकाे तथ्यजाच
तापक्रम बढेसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्छ ?
तापक्रम बढेर ३० डिग्री सेल्सियस पुगेपछि अर्थात् गर्मी लागेसंगै कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुँदै जाने सूचना यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । कोरोना भाइरस तापक्रम बढेपछि अथवा गर्मी मौसम शुरु भएपछि कम हुन्छ भन्ने प्रमाणित तथ्य होइन । “फ्लू र इन्फ्लुएन्जा जस्ता भाइरसकाे प्रभाव गर्मी बढेसँगै कम हुँदै जाने भएकाले नोभल कोरोना भाइरस पनि उस्तै होला भनेर अनुमान गरिएको हो तर यो भाइरस नयाँ भएकाले केही भन्न सकिँदैन,” डा. पुष्पमणि खरालले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
पछिल्लाे अध्ययनले के भन्छ कोभिड–१९ बारेमा ?
पछिल्लो एक अध्ययनमा कोभिड–१९ बाट संक्रमितमध्ये झण्डै एक चौथाइ बिरामीमा शुरुतिर लक्षण नदेखिएकाे रहेकाे बताइएकाे छ । यसैले शुरुमा लक्षण नदेखिएका व्यक्तिमा पनि पछि लक्षण देखिने र संक्रमित हुनसक्ने जनाइएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले यसै कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न र अर्को व्यक्तिभन्दा कम्तिमा ६ फिटको दुरीमा रहन सुझाएका छन् । Agency
Previous articleविहानै कोरोनाका ३२ जना नयाँ संक्रमित थपिए
Next articleभारतबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएका चालक खुलेआम रूपमा घुम्दै
यस्ता छन् ‘हर्ट अट्याक’ हुन लागेको पहिल्यै थाहा पाउने लक्षण
भिटामिन सीको कमिले शरीरमा कस्ता हानी ? कस्ता खानेकुरामा पाइन्छन् ?